८ बैशाख शनिबार, २०७५ | ०६:५१:०० मा प्रकाशित
अभियोग ४ : तपार्इं उपयोगवादी हुनुुहुन्छ । ०६२र६३ सालको आन्दोलनताका नरहरि आचार्यको साथ लिनुभयो । त्यसपछि क्रमशः सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवासँग नजिक हुनुभयो । पछिल्लो महाधिवेशनमा कृष्ण सिटौलासँग काँध मिलाउनुभयो । र, संसदीय दलको निर्वाचनमा प्रकाशमान सिंहलाई सघाउनुभयो । राजनीतिक उचाइ प्राप्त गर्दै जाँदा पुराना भर्‍याङ बनाएका वा सघाएका व्यक्तिहरूलाई छाड्दै जानुभयो ।
म एउटा मिसनमा गएको थिएँ । म त्यो मिसनमा काम गर्दै जाँदा अरू कोही पनि आउनुभएन । जम्मा कृष्ण सिटौला आउनुभयो । हामी समूह बनाएर चुनाव लड्यौँ । ०६२र६३ को आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति भएको हुनाले हामीलाई सजिलो भयो । त्योवेला कृष्ण सिटौलाको ठाउँमा शशांक कोइराला आउनुभएको भए, प्रकाशमान सिंह आउनुभएको भए उहाँहरूको टिमबाट चुनाव लडिन्थ्यो । कुनै योजनाअनुसार हामी चुनाव लडेका होइनौँ । शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल मात्र लड्नुभएको भए सायद म एक्लो हुन सक्थेँ । किनभने मैले आत्मादेखि गर्छु भनेर थालिसकेको थिएँ । वर्षौंदेखि प्लान गरेर महाधिवेशनमा प्यानल बनाएर लडेको होइन ।
यो गुनासो गर्न पाउने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताको नैसर्गिक अधिकार हो । म उहाँहरूको सांसद भइसकेपछि उहाँहरूले भन्ने पनि मलाई हो । त्यसको जिम्मा पनि मैले लिनुपर्छ, म लिन्छु । म यतिचाहिँ भन्न सक्छु कि सांसद भएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्रोतसाधनलाई पु¥याउने, सम्बन्धित निकायलाई झकझक्याउने सन्दर्भमा नेपालभरका कुनै पनि सांसदसँग मापन गर्ने यन्त्र नै बन्छ भने पनि म सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छु । त्यसमा म अलमलमा छैन, त्यो मेरो ड्युटी हो । तर, मेरो क्षेत्रका मतदाताले परिणाम आएन भन्न पाउनुहुन्छ । एकैपटक धेरै स्रोतसाधन लिएर जान खोज्दा समस्या भएको छ । दोस्रो, गएको १५–२० दिनमा बाटोसँग मात्रै सम्बन्धित भएर ७ वटाजति बैठक गर्यौ । तर, हाम्रो निकायसँग त्यो क्षमता नै छैन, उनीहरू गर्न नै सक्दै सक्दैनन् । निजी क्षेत्र ९कन्ट्याक्टर०सँग पनि त्यो क्षमता छैन । ममा त्यो छटपटाहट छ । गराउने प्रयास पनि छ । म त यति धेरै भोगेको छु, त्यही भएर प्रधानमन्त्री बोलिरहँदा क्षमताको पाटो हेर्नुभएको छ कि छैन भन्ने लाग्छ । मान्छेको नियत ठीक बनाउन सकिन्छ, तर गर्न नसक्ने पाटोचाहिँ ठूलो समस्या छ । क्षमता छ कि छैन भन्नेबारे सोच्नुपर्छ ।
म त्यसको शतप्रतिशत खण्डन गर्छु । म एसएलसी पास गरेदेखि काम गर्न सुरु गरेको मान्छे हुँ । पहिला किताब पसलमा, त्यसपछि ट्युसन पढाउन थालेँ, रेडियोमा काम गरेँ, कम्पनी खोलेर काम गर्दै आएको २०औँ वर्ष भयो । पछिल्लो समयमा हामी चारजना साथीहरू मिलेर कृषिको काम सुरु गर्‍यौँ । हामीले आफ्नो परिश्रम गर्‍यौँ । लगानी गर्‍यौँ । मिहिनेत गरेर काम गर्‍यौँ । नाफा कमाउन सकेनौँ । घाटा भयो । मैले बाख्रापालन गरिरहेको छु, मासु पसल गरिरहेको छु । म जिल्ला–जिल्लामा जाँदा ‘दाइ मैले पनि पाठा पालिरहेको छु है, मैले पनि बाख्रापालन सुरु गरेँ है’ भन्ने यति धेरै मान्छे भेटिन्थे । म डुबेँ भनेर हात उठाएर हिँडेको भए थुप्रै मान्छे हतोत्साही हुन्थे । मैले पो नजानेर घाटामा गयो । म राजनीति गर्ने मान्छे, संयोग कस्तो भने हामी चारैजना राजनीति गर्ने भएकाले हामीले तरिका पु¥याएनौँ । हामीले हात उठाउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन भन्नेर डुब्दाडुब्दै पनि समाजप्रतिको जिम्मेवारीले गर्दा हामी कामबाट भागेनौं । तर, एउटा बहुलठ्ठी आएर बोलिदिने अनि समाजलाई मैले गरेको होइन भनेर जवाफ दिइरहनुपर्ने ? मैले जग्गा नकिनेर, बाख्रा पाल्ने भनेर लागेको मान्छेले जिन्दगीभर जवाफ दिएर हिँड्नुपर्ने ? जसले नभएको कुरा भन्यो उसलाई चाहिँ आनन्द ।
राजनीतिमा इथिक्सभित्र बस्नुपर्छ । मेरो शुभचिन्तकले म निस्कने वेलामा एउटा कुरा गर्नुछ भन्यो भने ‘मेरो डिभोर्सको बारेमा कुरा गर्न लागेको’ भनेर सोध्थेँ । डेनमार्कमा सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय झन्डामाथि रक्सीका गिलास राखिएको फोटो सार्वजनिक भयो र रक्सी खाएर नेपाली झन्डा पनि थाहा नपाउने मान्छे भनेर चिनाउन खोजियो । पछिल्लो समय धर्मसँग जोडेर पनि प्र्रचार गरियो । एकचोटि मलाई क्रिस्चियनसँग सम्बन्ध छ, हिन्दू धर्मसँग लगाव छैन भनेर भनियो । यस्ता कुराको खण्डन गर्ने कुरा पनि भएन । मलाई के कुरामा नरमाइलो लाग्छ भने यस्तो सशक्त मिडिया भएको ठाउँमा, सचेत नागरिक भएको ठाउँमा यस्ता विषय केही मान्छेले आफ्नो इन्ट्रेस्टअनुसार निरन्तर भनिरहन सक्ने र त्यसको सबै वनरसिप भिक्टिममाथि हालिदिने, अनि जवाफ दिइरहनुपर्ने रु खास प्रश्न त जसले भन्छ ऊमाथि तेर्सिनुपर्ने हो । आजभोलि त बानी भइसक्यो । आज मात्र श्रीमतीले ‘२० वर्षे गाडी फाल्नुभन्दा ७० वर्ष नाघेका नेतालाई नदीमा फालिदिनुपर्छ भनेको हो र, फेसबुकमा हालेको छ’ भनेर सोधिन् । अब फेरि तीन÷चार दिन यो आउने भएछ भन्ने ठानेँ । ०६२/६३ पछि पार्टीभित्र जब एउटा पोजिसन बन्दै गयो, तब ममाथि निरन्तर प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ ।
अभियोग १२ ? स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा राम्रा मुद्दा अघि सारेर प्रचार गर्नुभयो । तर, तत्काल व्यवहारमा देखिने केही काम भएनन् ।
कतिलाई यसो गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो । म पनि सोच्छु– फेरि मन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा के–के गर्थें होला, के–के गर्दिन थिएँ होला । तर, मेरो कुरा यस्तो थियो । मन्त्री सार्वजनिक दबाबमा हुन्छ, छोटो समयका लागि भएकालाई त अझै बढी दवाव हुन्छ । जम्मा ६ महिनाका लागि मन्त्री भएको, परिस्थितिले ९ महिना बसियो । नयाँ मन्त्रालय मलाई त्यसका बारेमा ज्ञान थिएन । तत्काल देखिनेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सुझाब र दबाब ममाथि नभएको होइन । तर, म समितिको सभापति भएर दुई वर्ष काम गर्दा राम्रो ज्ञान के कुरामा भएको थियो भने सही नीति बन्यो भने राम्रो परिणाम आउँछ । बरु केही समय गाली खानुपरे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सही नीति ल्याएर काम गर्छु भनेर लागेँ । म अहिले गर्वका साथ के भन्न सक्छु भने अबको आठ–दश वर्षको स्वास्थ्य क्षेत्रको विषय भनेको त्यो वेला मैले गरेको नीति नै हुनेछ । मैले जुन काम सुरु गरेँ, अब आउने मन्त्रीहरूले त्यसलाई पूरा गर्ने मात्रै हो । त्योभन्दा पर जानुपर्दैन । ती सबै काम नगरेर छोटो अवधिका लागि मात्र काम गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने विषयमा म डिफेन्स गर्दिनँ । किनभने मानिसको आ–आफ्नो सोचाइ हुन्छ । मैले केही आधार तयार पार्नुपर्ने थियो, त्यो तयार गरेँ । नयाँपत्रिकाबाट साभार